Amagumbi abakhenkethi - isiseko sokuhlola iHlathi - I-Airbnb
Amagumbi abakhenkethi - isiseko sokuhlola iHlathi
Amagumbi abakhenkethi ayindawo yokuhlala ekhululekile, efanelekileyo njengendawo yokuqala yohambo oluya kwiHlathi laseBiałowieża.
Amagumbi amabini anegumbi lokuhlambela, iholo, ikhitshi kunye nomnyango owahlukileyo. Ukufikelela kwindawo yokuzonwabisa kunye nendawo yokupaka. Kuyafaneleka ukuthatha ithuba lonikezelo lwethu lweholide e-Białowieża.
Sinokubonelela ngeendwendwe zeHlathi kunye nomkhokeli wabakhenkethi okanye uncedo ekuququzeleleni ixesha lokukhulula - kwindawo okanye kwindawo ejikeleze indlu.
Ngaphakathi i-ozonated kwaye icocwe nge-steam cleaner
Amagumbi amabini okulala abanzi. Kwigumbi lokuqala, kukho iibhedi ezimbini zehotele ezingatshatanga ezinokudityaniswa zibe kabini kunye nendawo eyi-180 cm. Igumbi lesibini linebhedi enye. Kuwo omabini amagumbi kukho iiwodrophu ezinkulu, iitafile, izitulo kunye neetafile ezisecaleni kwebhedi. Indlu inedesika kunye nesitulo seofisi. Ikhitshi linesitovu sokungeniswa, imicrowave, ifriji, iketile, iipleyiti, izinto zokuthambisa kunye nekhitshi. Kwigumbi lokuhlambela kukho i-cabin yokuhlamba kunye neshawari yemvula kunye nomatshini wokuhlamba.
Indlu ibekwe kumbindi weBiałowieża. Emva kwepropati kukho ukucocwa kweHlathi laseBiałowieża Primeval kunye nembonakalo yeNdawo yokuGcina eStrict. ngaphakathi 500 iimitha une iivenkile, zokutyela kunye nezikhumbuzo - iCawa yobuOthodoki, izakhiwo ukusuka amaxesha tsarist, imyuziyam, iipaki ezimbini.
Le ndawo sisiqalo esihle seendlela zokuhamba intaba kwiHlathi laseBialowieza.
Umamkeli sisikhokelo sokuhamba esineminyaka emininzi yamava, oya kukucebisa ekukhetheni ezona ndawo zinomdla wokutyelela.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Białowieża